Operation Opera ( အီရက်နူကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖိုကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခြင်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » Operation Opera ( အီရက်နူကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖိုကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခြင်း )	13
ရူတင်လေးလဲခနနားတုန်း… ပျင်းပျင်းနဲ့ မင်းသားဆောရိုး… ယူကျုစ့်ကြည့်လိုက်မိတယ်..တကယ်တော့ နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀က အများပြည်သူပရိသတ်ပိုင်တာကလား ….နားရတယ်မရှိပါဘူး … အငိငိငိ …ခုလဲကြည့်လေ …
ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေချည်းပဲ သုံးဆယ့်ရှစ်ကားဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ..နိုင်ငံခြားရှိုးပွဲကတွေကလဲ သေအောင်ခေါ်တဲ့အပြင်…ပိုင်ထားတဲ့ခရီးသွားကုန်ပဏီဆယ့်ရှစ်လုံးထဲက ခရီးစဉ်တွေချရေးပြရအောင်ကလဲ …သူကြီးပိုက်ဆံတောင်းမှာကြောက်ရနဲ့ …
လိုရင်းကိုပြန်ကောက်ရရင် …မန်းဂေဇက်ထဲက အနှစ်နှစ်အလလ အားပေးလာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကို ကျွန်တော်မင်းသားဆောရိုး…ကြည့်မိတဲ့ Documentary လေးတခုကြည့်စေချင်တဲ့စေတနာပါ ။
ဇွန်လ ၁၉၈၁ .. ရုတ်တရက်ကြီးဆိုသလို ..ဘက္ကဒက်မြို့ ကောင်းကင်ယံမှာ ဂျက်တိုက်လေယဉ်ရှစ်စီး ပေါ်ထွက်လာပါတယ် ။ အချိန်ကတော့ အီရက်အာဏာရှင် ဆဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ ဘုန်းမီးနေလ တဟုန်းဟုန်းတောက်နေချိန်…..
ဒီအဖြစ်အပျက်က ကမ္ဘာမှာဖြစ်ဖူးခဲ့သမျှ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု..စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်မှုတွေထဲက လုပ်ရဲကိုင်ရဲအရှိဆုံးတစ်ခုပါ ။
တိုက်လေယဉ်တွေက ရုတ်တရက် အီရတ်ကောင်းကင်ယံကနေ သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်တွေဆီ ထိုးဆင်းလာခဲ့ပါပြီ ။ အတောင်ပံတွေရဲ့တဖက်တချက်မှာ အစ္စရေးလေတပ်ရဲ့အထိမ်းအမှတ်…. ဒေးဗစ်ရဲ့ကြယ်….
ဒါဟာ အံ့သြစရာတခုပါပဲ … ဘာကြောင့် အစ္စရေးရဲ့လေတပ်က မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဝေးကွာလွန်းတဲ့အကွာအဝေးကနေ တစုံတရာထောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပဲ တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာပါလဲ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ကတဲက အစ္စရေးရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းက ဒီသတင်းကိုရထားပြီးသားပါ ။
ယနေ့မှာတော့ အစ္စရေးဟာ အခုစစ်ဆင်ရေးကို အများပြည်သူတွေသိဖို့ ပထမဆုံးအကြိမ်…ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ ။စစ်ဆင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ..တိုက်လေယဉ်မှုးတွေ .. စစ်ဆင်ရေးအရာရှိတွေ လက်နက်အရာရှိတွေက သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ရင်သိမ့်တုန်ဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို …ပြည်သူလူထုကို ပြောပြနိုင်ပါပြီ ။
ဒီအဖြစ်အပျက်က ကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါပြီ ။ CIA အရာရှိတွေက အမေရိကန်သမ္မတကို သူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့သတင်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်…သမ္မတကြီးရဲ့ ..ဘာ..ဆိုတဲ့အာမေဋိတ်သံက အတော်ကိုကျယ်လောင်ခဲ့အောင် …ဒီအဖြစ်အပျက်က တကယ်တော့ ရုတ်တရက်ကြီးပါ …
ဒါက အစ္စရေးလေတပ်ရဲ့ အီရက်နူကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖိုကို ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ပါ ။
ဒီအချိန်ကအစ္စရေးနဲ့ အာရပ်တွေရဲ့ကမ္ဘာက သိပ်အတည့်လှကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး ….အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် မနာကင်ဘေကင် က ထိပ်တန်းလျို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးတခုကို ခွင့်ပြူချက်မီးစိမ်းပြလိုက်ပါပြီ ။
မကြာပါဘူး …ဆိုင်းနိုင်းသဲကန္တာရထဲက လျို့ဝှက် လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတခုကပြေးလမ်းတွေမှာ သယ်နိုင်သမျှထက်နှစ်ဆ တင်ဆောင်ထားတဲ့ ..ဂျက်လေယဉ်ရှစ်စီးနေယူထားပါပြီ ။ မတန်တဆတင်ဆောင်ထားတဲ့အလေးချိန်အတွက် ပြေးလမ်းတိုလေးက တိုက်ခိုက်ရေးဌက်တွေအတွက် စိန်ခေါ်စရာပါ ။
မကြာခင်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးအံ့သြသွားတော့မယ့်အဖြစ်အပျက်တခုက စတင်ဖြစ်ပျက်နေပါပြီ ။
အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့အနာဂါတ်က ကျွန်တော့်ပုခုံးမှာရောက်နေသလိုပါပဲ လို့ .ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေမို့က ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
ဒီစင်ဆင်ရေး Operation Opera က လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကတဲက စီစဉ်ခဲ့တာပါ ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဟင့်အင်း
ဟုတ်ပါဝူး ကိုကိုစောရိုးရဲ့ရုပ်ရှင်ကားပဲ ကျိချင်တာလို့
Ma Ma says: (ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေချည်းပဲ သုံးဆယ့်ရှစ်ကားဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ….)
မြန်မာကားတွေက တစ်နှစ်လုံးတောင် ၃၈ကား မရိုက်ရတာဆိုတော့………..
ဒီမင်းသားဆိုင်ထားတာ ဟောလီဝုတ်ကား ဖြစ်ရမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: ဟောလိဝုဒ်ကလည်း အဲ့လောက်မှ မရိုက်နိုင်တာ
သေချာတယ် သူရိုက်နေတာ မြန်မာဗီဒီယိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: ဒီခေတ်မှာတော့.. အီရန်ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို… ဗုံးသွားမကြဲပဲ.. သူတို့စရိပ်နဲ့သူတို့ပဲ.. ပိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်..။
အဲ.. မြောက်ကကြီးတွေကိုတော့… သူတို့နေရာမှာပဲသူတို့စမ်းသပ်ဖေါက်ခွဲဖြစ်အောင် ပိတ်စို့ထားတယ်..။
အဲဒါနဲ့.. မြောက်ကကြီးတွေ..အနုမြူဓာတ်သင့်ပြီး.. ကင်ဆာမြန်မြန်ဖြစ်.. မြန်မြန်မျိုးကန်းကုန်ရော…
အနိစ္စ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: မင်းသား ဆောရိုး ဘယ်ပျောက်နေတာတုန်းး
alinsett says: အခုတလော ရွာသူားအတော်များများ
အနော်လည်း ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဖွေးဖွေးနဲ့ ကိုယ်ဖိရင်ဖိပေါင်းပြီး
ရုပ်ရှင်လောကထဲ ခြေစုံပစ် ဝင်လိုက်မှ ထင်တယ်။
အနော့်ဥပဓိနဲ့ဆိုရင် စိုင်းအောင်တင့်လို ဇာတ်ရုပ်မျိုးချည်း ငှားကြမှာ
CharTooLan says: တိဘာဘူး ကျုပ်တို့ရွာထဲမှာမြန်းဖစ်တာလားလို့စ် :D
အောင် မိုးသူ says: ကမ္ဘာမြေကြီးသာယာပါစေ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အာရပ်တွေ သူတို့အချင်းချင်း တိုက်ပြီး သေကုန်ရင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပဲနော်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကိုကိုဆောရိုး မတွေ့တာကြာပေါ့…တွေ့မဲ့တွေ့တော့လည်း ဗုံးကြဲလေယာဉ်ပေါ်မှာ .ကားတွေအများဂျီးရိုက်နေရတယ်ချိုဒေါ့…ဘော်ဒီရုံမှာလုပ်နေတာလားငင်…ငိငိ
Swal Taw Ywet says: FB မှာ ဖတ်လိုက်မိသာနဲ့
Lap Top ထဖွင့်ပြီး ယူကျုကနေကြည့်လိုက်တယ်ရယ်။
ှSnap Shot ဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်တအုပ်ကြောင့် အဲဒီဇာတ်လမ်းကို ပိုစွဲနေမိခဲ့တာခင်ဗျ။
အစ္စရေး လို့ ဖြေလေ့ရှိတဲ့ သူတယောက်မို့ပါ။
နိုင်ငံသစ်တခုမွေးဖွားခြင်း Exodus ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။
sorrow says: ယွန်ကစ်ပူးစစ်ပွဲ . ဂျွန်စစ်ပွဲ .. ၁၉၄၈ အာရပ်အစ္စရေးစစ်ပွဲ ..Operation Orchard ..အဲ့တာလေးတွေပဲကြည့်ဖြစ်နေတယ်…အလွန်လဲအားနေတာနဲ့ ..ကိုစွယ်တော်ကြီးရေ …
Mr. MarGa says: ရေတပ် ရေတပ် နဲ့ အော်နေပြီးတော့ ဘာလို့ တိုက်လေယာဉ်တွေပဲ ထိုင်ကြည့်နေရသတုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.